लेक्साप्रो बनाम ज़्यानाक्स: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
समाचार समुदाय, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु प्रेस स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण कम्पनी, चेकआउट मनोरञ्जन भारी खेल
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> लेक्साप्रो बनाम ज़्यानाक्स: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
त्यहाँ धेरै औषधी विकल्पहरू उपलब्ध छन् यदि तपाईंलाई चिन्ता छ। लेक्साप्रो (एसिटालोप्राम) र जान्याक्स (अल्प्राजोलम) दुई फरक पर्चेको औषधि हो जसले सामान्य चिन्ताको साथसाथै डिप्रेसनको साथ चिन्ताको उपचार गर्न सक्छ। लेक्साप्रो एक एसएसआरआई (चुनिंदा सेरोटोनिन रिउपटेक अवरोधक) औषधि हो, जबकि Xanax एक बेंजोडाइजेपाइन हो। दुबै औषधि एक अर्का भन्दा फरक तरीकाले काम गर्छन्, यद्यपि तिनीहरू समान मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
लेक्साप्रो बनाम Xanax बीचको मुख्य भिन्नताहरू के के हुन्?
लेक्साप्रो (लेक्साप्रो कुपन) एक एफडीए-अनुमोदित औषधि हो जुन जेनेरिकको रूपमा पनि उपलब्ध छ। लेक्साप्रोको जेनेरिक नाम एसिटालोप्राम हो। यसले सेरोटोनिनको पुनःअपटेक रोक्दै काम गर्दछ ताकि दिमागमा बढ्दो स्तर छ। सेरोटोनिन मूड र राम्रोको लागि जिम्मेवार महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर हो। लेक्साप्रो प्राय: दैनिक एक पटक लिइन्छ र अधिकतम चिकित्सीय सम्भावना पुग्न केहि हप्ता लिन सक्दछ।
Xanax (Xanax कूपन) एक ब्रांड नाम औषधि हो कि FDA चिन्ता उपचार गर्न अनुमोदित छ आतंक विकार । Xanax को जेनेरिक नाम अल्प्रजोलम हो। यसले GABA को प्रभाव बढाउँदै काम गर्दछ, अवरुद्ध अणु जसले मस्तिष्कमा स्नायु गतिविधि शान्त गर्न सक्छ। Xanax प्राय: चिन्ता वा आतंककारी आक्रमणको लागि प्रति दिन to देखि times पटक लिन्छ।
सम्बन्धित: लेक्साप्रो विवरणहरू Xanax विवरण Escitalopram विवरण s | Alprazolam विवरण
यो कति समय लाग्दछ fluconazole २०० मिलीग्राम को लागी काम गर्न को लागी
लेक्साप्रो बनाम Xanax बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग चयनित सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ता बेन्जोडियाजेपाइन
जेनेरिक नाम के हो? Escitalopram अल्प्राजोलम
विस्तारित-रिलीज मौखिक ट्याब्लेट
मानक खुराक के हो? १० वा २० मिलीग्राम दैनिक ०.२5 देखि ०. mg मिलीग्राम प्रति दिन तीन पटक
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? तपाईको डाक्टरको निर्देशन अनुसार लामो अवधि छोटो अवधि वा लामो समय तपाईंको डाक्टरको निर्देशनमा निर्भर गर्दछ
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र १२ बर्ष र माथिका बच्चाहरु वयस्कहरू
सर्तहरू लेक्साप्रो बनाम Xanax द्वारा उपचार गरिएको
Lexapro र Xanax दुई ब्राण्ड नाम औषधिहरू जुन वयस्कहरूमा चिन्ताका लागि प्रयोग गरिन्छ। ती दुबै चिन्ता वा एक्लोपनसँग सम्बन्धित चिन्ताको उपचार गर्नका लागि संकेत गरिएका छन्।
लेक्साप्रो वयस्क र किशोर किशोरीहरूमा ठूलो उदासीनताको उपचार गर्न पनि अनुमोदित छ। लेक्साप्रोको लागि अफ-लेबल प्रयोगहरूमा जुनूनी बाध्यकारी विकार, आतंक विकार, र अनिद्रा समावेश छ।
वयस्कहरूमा पेनिक डिसअर्डरका लागि Xanax पनि स्वीकृत भयो। यो कहिलेकाँही डिप्रेसनको लागि अफ-लेबल प्रयोग गर्न सकिन्छ यद्यपि यो वयस्कहरूको लागि सामान्य रूपमा चिन्ता र उदासीनताका लागि प्रयोग गरिन्छ। यो कहिलेकाँही अनिद्राको लागि लेबल बाहिर पनि प्रयोग गरीन्छ।
सर्त लेक्साप्रो Xanax
डिप्रेसनको साथ चिन्ता हो हो
प्रमुख उदासीनता विकार हो अफ-लेबल
अनिद्रा अफ-लेबल अफ-लेबल
के लेक्साप्रो बनाम Xanax अधिक प्रभावी छ?
Lexapro र Xanax दुबै चिन्ताको उपचारको लागि प्रभावकारी छन्। यद्यपि बेन्जोडियाजेपाइनहरू चिन्ताको लागि सामान्य रूपमा प्रयोग गरिदैन, केहि अध्ययन देखाउनुहोस् कि उनीहरू एसएसआरआई भन्दा बढि प्रभावकारी हुन सक्छन्। यद्यपि, बेंजोडाइजेपाइनहरू केवल छोटो अवधिका उद्देश्यहरूको लागि मात्र सिफारिश गरिन्छ।
कहिलेकाँही एसएसआरआई ड्रग्स र बेन्जोडियाजेपाइन चिन्ता र उदासीनताको लागि तोकिन्छन्। किनभने एसएसआरआईले यसको पूर्ण प्रभावहरू महसुस गर्न केहि समय लिन सक्दछ, लेन्जाप्रोजस्तो एसएसआरआईको साथ थेरपी शुरू गर्दा बेन्जोडियाजेपाइनले मद्दत गर्न सक्दछ। मा साहित्य समीक्षा , यो फेला पर्‍यो कि बेन्जोडाइजेपाइनहरूले चिन्ताको नियन्त्रणमा सुधार गरे र एसएसआरआई शुरू गर्दा प्रारम्भिक चिन्ताको साथ मद्दत गरे।
अन्य केस रिपोर्टहरूले पत्ता लगाए कि जब सँगै लिइन्छ, बेंजोडाइजेपाइनले एसएसआरआईको प्रभावकारिता बढाउन सक्छ। एक मा रिपोर्ट , बेन्जोडियाजेपाइन र एसएसआरआई सँगै लिने बिरामीले सँगै अनुभवी उन्माद, वा एक उत्साहजनक मुड अक्सर वृद्धि ऊर्जा र तर्कहीन निर्णय निर्णय द्वारा विशेषता।
Lexapro र / वा Xanax को साथ उपचार एक व्यक्तिको अवस्था र लक्षणहरूको लागि ब्यक्तिगत गरिएको हो। यो उपलब्ध उपचार उपचार विकल्प अन्वेषण गर्न डाक्टर वा मानसिक स्वास्थ्य सेवा पेशेवरको परामर्श गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
कभरेज र लेक्साप्रो विरूद्ध Xanax को लागत तुलना
लेक्साप्रो एक प्रिस्क्रिप्शनको साथ किन्न सकिन्छ र धेरै मेडिकेयर र बीमा योजनाहरू द्वारा कभर गरिएको हुन्छ। X० दिनको लेक्साप्रो ट्याब्लेटको आपूर्ति करिब $ 400 लागत गर्न सक्दछ। एकलकेयर डिस्काउंट कार्डको साथ जेनेरिक एस्सिटलोप्राम खरीद गर्दा तपाईंको पैसा बचत हुन्छ र लागत---to to to मा ल्याउन सक्छ जुन तपाईं फार्मेसी प्रयोग गर्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ तपाइँको स्थानीय फार्मेसीबाट Xanax खरीद गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, अधिकांश मेडिकेयर बीमा योजनाहरूले यसको सामान्य संस्करणलाई समाहित गर्दछ। औसत खुद्रा मूल्य $ 400 हो तर तपाईं 0.5 mg mg $ २१ को लागी ०. mg मिलीग्राम अल्प्रजोलम जेनेरिक ट्याबलेटको count० गणनाको बोतल खरीद गर्न सक्नुहुन्छ।
मानक खुराक १० मिलीग्राम ट्याब्लेट (-०-दिन आपूर्ति) ०. mg मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ ०- $ .० $ ०- $ 2$२
एकलकेयर लागत $ 9- $ 37 $ 9- $ 21
लेक्साप्रो बनाम Xanax का सामान्य साइड इफेक्टहरू
लेक्साप्रो र Xanax दुबै केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (सीएनएस) लाई प्रभावित गर्न सक्दछ। दुबै औषधीहरूले सामान्य सीएनएस साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ जस्तो कि टाउको दुख्ने, चक्कर आउने र अनिद्रा। जे होस्, निन्द्रा वा निन्द्रा Xanax को एक अधिक सामान्य पक्ष प्रभाव हो।
लेक्साप्रो र झ्यानाक्सले अन्य साइड इफेक्टहरू पनि निम्त्याउन सक्छ जस्तै सुक्खा मुख, मतली, बान्ता, र कब्ज। तौल परिवर्तन जस्तै वजन घटाउन वा तौल को लाभ पनि एक औषधि संग सम्भव साइड इफेक्ट हो। लेक्साप्रोले पच र ग्यास (पेट फूलना) जस्ता गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल साइड इफेक्ट निम्त्याउने बढी सम्भावना हुन्छ।
कति उच्च tylenol3उच्च प्राप्त गर्न
लेक्साप्रोको अधिक गम्भीर प्रतिकूल प्रभावहरूमा सेरोटोनिन सिन्ड्रोम, एउटा गम्भीर चिकित्सा अवस्था जसमा तत्काल ध्यान आवश्यक छ। Xanax का अन्य प्रतिकूल प्रभावहरु समावेश गर्न सक्छ मेमोरी समस्याहरु वा संज्ञानात्मक डिसफंक्शनहरू जब लामो अवधि प्रयोग गरिन्छ।
सुख्खा मुख हो %% हो पन्ध्र%
टाउको दुखाई हो २%% हो १%%
तन्द्रा हैन - हो %१%
मतली हो १%% हो १०%
बान्ता हो %% हो १०%
पखाला हो %% हो १०%
कब्ज हो %% हो १०%
अपच हो %% हैन -
फ्याटुलेन्स हो दुई% हैन -
कामवासना घटाइयो हो %% हो १%%
डिप्रेसन हैन - हो १%%
नर्भस हो - हो %%
भोक कम भयो हो %% हो २%%
नाकको भीड हो <1% हो %%
धमिलो दृष्टि हो <1% हो %%
अनिद्रा हो %% हो %%
स्रोत: डेलीमेड ( लेक्साप्रो ), डेलीमेड ( Xanax )
लेक्साप्रो बनाम Xanax को ड्रग अन्तर्क्रिया
लेक्साप्रो र Xanax केहि समान औषधीहरू जस्तै मोनोआमाइन अक्सीडेस इनहिबिटरहरू (MAOIs), ओपियोइड्स, एन्टिकोनभल्सेन्ट्स, ट्राइप्टान्स, र सेरोटोनर्जिक ड्रग्ससँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछ। यी औषधिहरू सँगै लिएर शरीरमा ड्रगको स्तरमा असर गर्न सक्छ जसले प्रतिकूल प्रभावको जोखिम बढाउन सक्छ।
लेक्साप्रो जस्ता एसएसआरआईहरूले NSAIDs र अन्य रगत पातलोहरूसँग वारफेरिनसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ। यी औषधिहरू सँगसँगै लिँदा रक्तस्रावको खतरा बढ्न सक्छ।
Xanax ले जन्म नियन्त्रण औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न पनि सक्छ। मौखिक गर्भ निरोधकहरूले बेन्जोडियाजेपाइनहरूको साइड इफेक्ट बढाउन सक्दछन्।
किनकि लेक्साप्रो र Xanax निश्चित लिवर एन्जाइमहरू द्वारा प्रक्रिया गरिन्छ, तिनीहरू अन्य औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन् जसले यी एन्जाइमहरूलाई असर गर्दछ। लेक्साप्रो र Xanax CYP3A4 एंजाइम इनहिबिटरहरू र inducers को साथ कुराकानी गर्न सक्छन्। कुन ड्रग्स लेक्साप्रो वा Xanax सँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ भनेर निर्धारण गर्न डाक्टर वा फार्मासिष्टसँग परामर्श गर्नुहोस्।
औषधि ड्रग क्लास लेक्साप्रो Xanax
ट्रामाडोल ओपियोड्स हो हो
कार्बामाजेपाइन एन्टिकोनवल्सेन्ट हो हो
Desipramine सेरोटोनर्जिक ड्रग्स हो हो
रिज्याट्रिप्टन Triptans हो हो
नेप्रोक्सेन NSAIDs हो हैन
वारफेरिन एन्टिकोआगुलेन्ट हो हैन
लेभोनोर्जेस्ट्रेल इथिनिल एस्ट्राडियोल
Drospirenone इथिनिल estradiol
Norethindrone मौखिक गर्भ निरोधक हैन हो
Lexapro vs Xanax को चेतावनी
लेक्साप्रो लिई आत्महत्या गर्ने विचार र व्यवहारको जोखिम बढाउन सक्छ, विशेष गरी बच्चाहरू र युवा वयस्कहरूमा। डिप्रेसनको लागि लेक्साप्रो लिने किशोर-किशोरीहरूमा आत्महत्या गर्ने विचारधाराको बढ्दो जोखिम हुन सक्छ। लेक्साप्रो १२ बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूमा प्रयोग हुनुहुन्न।
Xanax ओपिओइडको साथ प्रयोग गर्नु हुँदैन श्वासप्रश्वासको उदासीनता, कोमा, र गम्भीर अवस्थामा मृत्युसमेत बढ्ने जोखिमको कारण। यी औषधिहरू केवल सीमित खुराकमा र स्वास्थ्यसेवा पेशेवरले घनिष्ठ अनुगमनको साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ।
लेक्साप्रो वा झ्यानाक्सको साथ उपचार अचानक रोक्न हुँदैन। दुबै औषधिहरू फिर्ता लिनका लक्षणहरूको जोखिम बोक्दछन् यदि तिनीहरू बन्द गरिए। निकासी लक्षणहरुमा चिड़चिड़ापन, मतली, बान्ता, र टाउको दुखाइ समावेश गर्न सक्छ। Xanax को उपयोग रोक्दा पनि दौर्ने खतरा बढ्न सक्छ। यसको सट्टामा, यी औषधीहरू डाक्टरको मेडिकल सल्लाहले बिस्तारै टेप गरिनु पर्छ।
लेक्साप्रो बनाम झ्यानाक्सको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
लेक्साप्रो एक एसएसआरआई औषधि हो जुन चिन्ता र उदासीनताको लागि निर्धारित छ। लेक्साप्रो जेनेरिक औषधिको रूपमा उपलब्ध छ। लेक्साप्रोको अधिकतम लाभ लिन १ देखि २ हप्ता लाग्न सक्दछ।
Xanax के हो?
Xanax बेन्जोडियाजेपाइन हो जुन चिन्ता र आतंक विकारहरूको लागि सिफारिश गरिएको हो। यो जेनेरिक औषधि, अल्पप्राजोलम को रूपमा उपलब्ध छ। Xanax ले लिने पछि १ देखि २ घण्टा भित्र अनुभवको साथ छिटो कार्य गर्दछ।
के लेक्साप्रो बनाम Xanax उस्तै हो?
होइन। लेक्साप्रो र झ्यानाक्स एकै होइनन्। लेक्साप्रो एक एसएसआरआई औषधि हो जुन डिप्रेसन र चिन्ताको लागि दैनिक एक पटक लिइन्छ। Xanax एक बेंजोडाइजेपाइन हो कि चिन्ता र आतंक विकारहरूको लागि प्रति दिन3वा4पटक लिन सकिन्छ।
के लेक्साप्रो बनाम ज़्यानाक्स राम्रो छ?
Xanax चिन्ता को छोटो अवधि के राहत को लागी अधिक प्रभावी छ। लेक्साप्रो प्राय: डिप्रेशनको लागि तोकिन्छ र पूर्ण हरूमा केहि हप्ता लिन सक्दछ। कहिलेकाँही लेक्साप्रो र झ्यानाक्स डिप्रेशनको साथ चिन्ताका लागि सँगै लगिन्छन्।
के म गर्भवती हुँदा लेक्साप्रो बनाम ज़ानाक्स प्रयोग गर्न सक्छु?
गर्भवती हुँदा लेक्साप्रो लिन सिफारिस गरिदैन। तेस्रो त्रैमासिकको समयमा लेक्साप्रो लिदा नवजात शिशु (पीपीएचएन) मा लगातार फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप हुन सक्छ। Xanax गर्भवती हुँदा सिफारिस गरिदैन।
म रक्सीको साथ लेक्साप्रो बनाम Xanax प्रयोग गर्न सक्दछु?
होइन। लेक्साप्रो वा Xanax मा हुँदा रक्सीको सेवनले सीएनएस साइड इफेक्टको जोखिम बढाउन सक्दछ जस्तै निद्रा, चक्कर, र टाउको दुखाइ। एसएसआरआई वा बेंजोडाइजेपाइनहरू प्रयोग गर्दा रक्सी पिउन सिफारिस गर्दैन।
के लेक्साप्रोले चिन्ता कम गर्छ?
हो। लेक्साप्रो चिन्ता उपचार गर्न मद्दत गर्न सक्छ। चिन्ता र उदासिनता भएका व्यक्तिहरूका लागि यो प्रायः सिफारिस गरिन्छ।
लेक्साप्रोलाई चिन्ताको लागि कति समय लाग्छ?
एक एसएसआरआई को रूप मा, Lexapro चिन्ताको लागि अधिकतम प्रभावकारिता पुग्न केहि हप्ता लाग्न सक्छ। लेक्साप्रोले चिन्ताको लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्न न्युरोट्रान्समिटरहरूलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्दछ।
के लेक्साप्रोले तपाईंलाई निन्द्रा बनाउँछ?
लेक्साप्रोले केहि मानिसहरुमा थकान र उदासीनता निम्त्याउन सक्छ। यो साइड इफेक्ट सबैभन्दा सामान्य हो जब औषधि सुरु गर्दा। जे होस्, लेक्साप्रोको अधिकतर साइड इफेक्टहरू समयको साथ तिनीहरू आफ्नै समाधान गर्दछन्।
Lexapro तपाईं Xanax बन्द गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
लेक्साप्रो चिन्ताको साथ मद्दत गर्न सक्दछ Xanax लाई बन्द गर्दै। Xanax बन्द हुँदा तपाईको उत्तम विकल्पहरूको लागि डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।
एन्टीबायोटिक लिँदा प्रोबायोटिक्स लिने सबैभन्दा राम्रो समय
कसरी एक व्यक्ति ल्याक्टोज असहिष्णु हुन्छ
सामान्य रक्त ग्लुकोज दायरा के हो
हामी मध्ये कति जना मोटो छन्
तपाइँ कती छिटो फ्लू लाई समात्न सक्नुहुन्छ?
ह्यान्ड स्यानिटाइजर म्याद सकिएपछि कति लामो हुन्छ?